Ny endrika mainty Blackmagic dia manambara ny tetezana mikoriana ATEM vaovao | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Vaovao » Blackmagic Design dia manambara ny tetezana mikoriana ATEM vaovao
Fremont, CA, USA - Alakamisy 30 Jolay 2020 - Blackmagic Design Androany dia nanambara ny ATEM Streaming Bridge, mpanova vaovao izay mamaky ny renirano mivantana avy amina mpamadika modely ATEM Mini Pro ary mamadika izany ho SDI ary HDMI video. Ny tombony azo avy amin'ny ATEM Streaming Bridge dia azon'ny fampielezam-peo ampiasaina hampifandraisana rohy video avo lenta mivantana avy amin'ny studio ATEM Mini Pro. Io dia ahafahan'ny fampielezam-peo miditra amin'ny talenta marobe, manerantany. Ny stream video ATEM Mini Pro dia avo lenta kokoa noho ny rindrambaiko fihaonambe tsotra, noho izany ny mpanjifa mahazo kalitaon'ny fampielezam-peo, madio amin'ny lozisialy mpivarotra rindrambaiko streaming.
Azo jerena amin'ny volana Aogositra manomboka izao ny tetezan-jaza streaming Stream Blackmagic Design mpandraharaha manerantany ho an'ny US $ 245.
Ny ATEM Streaming Bridge dia mpamadika horonantsary ahafahan'ny mpanjifa mandray renirano H.264 avy amin'ny ATEM Mini Pro ary hamadika izany ho SDI ary HDMI video. Midika izany fa ny mpanjifa dia afaka mandefa horonantsary amin'ny toerana lavitra manodidina ny tambajotra Ethernet eo an-toerana, na amin'ny alàlan'ny internet manerantany. Azo atao izany satria mampiasa codecs H.264 mandroso ho an'ny kalitao avo kokoa amin'ny taham-data ambany dia ambany. Alao an-tsaina ny fampielezam-peo sy ny bilaogera miara-miasa amin'ny seho ary mamorona tambajotram-panatobiana studio fandefasana lavitra ATEM Mini Pro. Mora ny fanomanana satria ny rindrambaiko ATEM dia afaka mamorona fisie fisie izay azon'ny mpanjifa alefa mailaka amin'ny studio ATEM Mini Pro lavitra. ATEM Streaming Bridge no fomba mety indrindra hampiasana ATEM Mini Pro ho studio fampitana lavitra.
Ny mpandova ATEM Mini dia manamora ny famoronana famokarana fakan-tsary matihanina marobe amin'ny fandefasana mivantana amin'ny YouTube sy fampisehoana orinasa vaovao mampiasa Skype na Zoom. Ampifandraiso amin'ny ATEM Mini fotsiny ny mpanjifa ary afaka miova mivantana eo anelanelan'ny fampidirana fakan-tsary miisa 4 avo lenta ho an'ny sary tsara kalitao kokoa. Na mampifandraisa solosaina ho an'ny slide PowerPoint na lalao konsoly. Ny namboarina tao amin'ny DVE dia mamela sary mampihetsi-po amin'ny sary, mety tsara amin'ny fanehoan-kevitra. Betsaka ny effets vidéo koa. Ny maodely ATEM Mini Pro rehetra dia misy streaming mivantana izay azo ampiasaina hifandraisana mivantana amin'ny ATEM Streaming Bridge. Misy koa HDMI ho an'ny tetikasa. Ny fampidirana mikrô dia mamela ny mombamomba amin'ny takelaka avo sy ny takelaka avo lenta ho an'ny dinidinika sy fanolorana.
“Mpampiova mahaliana ity satria mamela ny fampielezam-peo hiaraka amina bilaogera manam-pahaizana manerantany miaraka amin'ny studio ATEM Mini Pro. Ny rohy fandefasana dia kalitaon'ny fandefasana ka tsy mila manaiky rindrambaiko maivana kalitao miaraka amina sary may ny mpitoraka bilaogy. Azo ampiasaina amin'ny tambajotra eo an-toerana ihany koa ny ATEM Streaming Bridge ka miasa ho mpanova IP ary afaka mifandray amin'ny televiziona lehibe ny mpanjifa mpanadihady horonantsary eny amin'ny habakabaka. ” hoy i Grant Petty, Blackmagic Design PDG. “Heveriko fa tena hahafaly ity. Alao sary an-tsaina izao tontolo izao misy studio sy mpandefa ATEM Mini Pro misy tambajotra izay mifandray rehetra amin'ny kalitaon'ny fandefasana! Tontolo mamorona tokoa izany! ”
Ny ATEM Streaming Bridge dia azo alaina amin'ny volana Aogositra amin'ny vola $ 245 US, tsy misy andraikitra, avy amin'ny Blackmagic Design Mpivarotra eran'izao tontolo izao.
Sarin'ny vokatra amin'ny tetezana Streaming ATEM, ary koa ny hafa rehetra Blackmagic Design Vokatra, azo jerena ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images.
Previous: Ny endrika mainty Blackmagic dia manambara vaovao ATEM Mini Pro ISO
Next: Fiantsonan'ny TV anabavy manompo NYC / NJ Area Select PlayBox Neo ho an'ny Playout sy Channel branding